The ụwa ọnụ nke ahia na-agbanwe agbanwe China. Ọtụtụ ndị magburu onwe Chinese ngwaahịa gaa ịgafe oké mgbidi na-agbanwe ụwa. Anyị na-irite uru site na ya. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ na ngwaahịa na-adịghị ị chọta na China, ndị ụwa ọnụ nke ahia bụ na usoro na anyị na-atụ anya na anyị nwere ike ime ihe maka ya.
Anyị nwere onwe anyị factory, nke a na-ese na elu-ọgwụgwụ mmepụta karịsịa ipigide na agịga ala amị. Anyị Advanced mmepụta na nchọpụta ngwá nwere ike hụ obere ụzọ oge na elu mma. Ma anyị na-arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme ka anyị ngwaahịa akara. Anyị elu na-eri-irè mmepụta na ọrụ ozi nwere ike mgbe niile izute gị chọrọ.